‘यो एक वर्षमा जनताले सरकारबाट परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाएनन्’ : थापा | रिपोर्टर्स नेपाल
‘यो एक वर्षमा जनताले सरकारबाट परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाएनन्’ : थापा
२०७५ पुष २६ गते प्रकाशित, l १६:४०
भोलि राष्ट्रिय एकता दिवस भव्य रुपमा मनाउन र सार्वजनिक विदा दिन कमल थापाको प्रधानमन्त्री ओलीसँग माग
काठमाडौं, २६ पुस । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भोलि राष्ट्रिय एकता दिवस देशव्यापी भव्य रुपमा मनाउन र उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका छन् । उनले भने,‘पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको योगदानलाई राजनीतिक आस्थासँग जोडेर हेर्नुहुँदैन् । एकीकरणको गौरव र ईतिहाँस कहिल्यैपनि परिवर्तन हुँदैन्।’
आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाईरहेको पनि थापाले विश्वास दिलाए । उनले भने,‘आम जनतालाई यसका बारेमा घच्घचाएर एउटा सशक्त जनमत सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दछौं ।’
अध्यक्ष थापाले आफ्नो करिब ४५ वर्षे राजनीतिक जीवन–यात्राको क्रममा आफूले सिकेको महत्वपूर्ण पाठ नै राष्ट्रवादी भन्न सजिलो तर राष्ट्रवादी भएर बाँच्नको निमित्त गाह«ो रहेको सुनाए । उनले भने,‘जब–जब नेपालमा राष्ट्रवादी शक्ति बलियो हुन थाल्दछ, तब–तब त्यो राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउनको निमित्त देशी तथा विदेशी शक्तिहरु क्रियाशिल हुन्छन् । र, त्यसको प्रभावबाटै राप्रपा पटक–पटक फुट्न गएको छ।’
विगतका कमिकमजोरीहरु हटाएर अघि बढ्ने र सबै राप्रपालाई एकीकृत गर्ने र बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्न आफूहरु लागिपरेको पनि उनले सुनाए । थापाले भने,‘यही क्रममा केही समय अघि पशुपतिजीले नेतृत्व गर्नुभएको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक), डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेतृत्व गर्नुभएको एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीसँग हामीले सघन रुपमा वार्ता गर्यौं ।’ राणा र लोहनीले उठाएका सबै विषयहरुलाई आफूहरुले सम्बोधन गरेको थापाको जिकिर छ ।
उनले भने,‘सबै विषयहरुमा सहमतिपनि भयो । सहमतिअनुसार नै एकता गर्ने मिति र स्थान् पनि निर्धारण गर्यौं । तर, एकता हुने एक दिन अगाडि हामीलाई आन्तरिक गृहकार्य गर्नकोनिमित्त समय पुगेन, चार/पाँच दिन समय चाहियो भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको थियो । तर, अहिले चार/पाँच दिनमात्रै होईन, चार/पाँच हप्ता, महिनौं बितिसकेको छ । अब म प्रतिक्षा गरेर बसिरहेको छु ।’
आफ्नो पार्टीले राजसंस्थाको एजेण्डा नछोडेको पनि उनले जिकिर गरे । उनले थपे,‘हामीले यो एजेण्डा छोडेका छैनौं । सँधै, हरेकपटक जोडेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकत्ता छैन् । हाम्रो एजेण्डाको रुपमा यो यथावत छ।’
पोखरामा तपाई र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबीच भएको भेटवार्तामा के–के कराकानी भएको थियो भनेर पत्रकार ऋषि धमलाले सोधेको प्रश्नमा थापाले भने,‘पार्टीको प्रशिक्षणको कार्यक्रम थियो । त्यही सिलसिलामा म पोखरा पुगेको थिएँ । पोखरा जाँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रपनि निजी भ्रमणमा पोखरामै रहेको थाहा भयो । र, मैले उहाँसँग माउन्ट ग्लोरी फरेष्ट रिसोर्टमा करिब डेढ घण्टाजति शिष्टाचार भेट गरें । त्यो शिष्टाचार भेटको क्रममा देशको समयसामयिक परिस्थितिका बारेमा विचार आदान–प्रदान भयो । देशको बिग्रँदो अवस्थाप्रति राजा ज्ञानेन्द्रमा चिन्ता रहेको पाएँ । ‘
धमलाले आफूले ज्योतिषहरुसँग लिएको अन्र्तवार्तामा उनीहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र २०७६ सालमा पूर्नस्थापना हुने दाबी गरेका छन् नि, तपाईलाई के लाग्छ ? भनेर राखेको अर्को जिज्ञासामा थापाले हाँस्दै भने,‘ऋषिजी तपाईको मुखमा दुधभात परोस् । ज्योतिषहरुको मुखमा पनि दुधभात परोस् ।’
थापाले वर्तमान दुई तिहाईको सरकारबाट जनताले यो एक वर्षमा परिवर्तनको अनुभुति गर्न नपाएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘दुई तिहाईको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो, तर जनताले यो अवधिमा परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । यो बीचमा शान्ति, सुरक्षाको अवस्था बिग्रिएको छ । महिलाविरुद्धका हिंसा, बलात्कारका घट्ना तिव्र रुपमा बढिरहेका छन् । तर, सरकारले आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेको छैन् ।’
त्यस्तै, थापाले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक भएको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रिय तहसम्म भ्रष्टाचारले ब्रम्हलुटको रुप लिईसकेको छ । वाईडबडी हवाईजहाज खरिद काण्ड भ्रष्टाचारको श्रृंखलामा थप कडी हो । यस सम्बन्धमा संसदीय समितिले निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिईपनि सकेको छ । अब त्यो प्रतिवेदनअनुसार सरकार र अख्तिया दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगबाट कारबाही हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु ।’
थापाले विगतमा भएका ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको काण्ड र साँढे ३३ केजी सुन काण्डलगायतका भ्रष्टाचारहरु, ऐनसेलको कर छली प्रकरण, राजश्व छलीका काण्डहरुमा समेत सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले छानबिन गरेर कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाओस भनेर पार्टीको तर्फबाट आग्रह पनि गरेका थिए ।
राप्रपाले सरकारसँग वार्ता गर्ने,कारण रहेछ यस्तो
विदेशी धर्म भित्रनु विकास होइनः कमल थापा